Fanondroana teknika momba an'i Marmaray | RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulMarmaray Fanondroana ara-teknika
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Faritra Marmara, Metro, TORKIA, VIDEO
endri-javatra ara-teknika marmaray
• Misy lavan'ny 13.500 m, izay misy ny 27000 m, izay mifangaro tsipika roa.
• Ny lalan'ny tenda dia vita amin'ny tonelina milentika sy ny tsipika 1 toradroa ny halavany amin'ny 1386.999 m, ny tsipika 2 ny fantsom-bolo dia 1385.673 m.
• Ny fitohizan'ny tonelina milentika any amin'ny sisin'ny Aziatika sy Eropa dia omena amin'ny tonelina mavitrika.Ny halavan'ny tsipika marika 1 dia 10837 m ary ny halavan'ny tsipika marika 2 dia 10816 m.
• Ny lalana dia lalana tsy misy balastika any anaty tonelina ary lalana ara-pomba an-tsary eo ivelan'ny tonelina.
• Ny lamasinina nampiasaina dia ny UIC 60 ary lalamby lalantsara moto.
• Ny fitaovana fifandraisana dia karazana HM izay endrika elastika.
• Ny lalamby 18 m halavany dia vita amin'ny lalamby vita amin'ny lasibatra lava.
• Ireo bloke LVT dia nampiasaina tamin'ny tonelina.
• Ny fikojakojana ny làlana Marmaray dia tanterahina miaraka amin'ireo milina rafitra vaovao amin'ny alàlan'ny hetsika ataontsika tsy misy fahatapahana mifanaraka amin'ny boky TCDD Road Maintenance ary ny fomba fikojakojana ny orinasa mpanamboatra mifanaraka amin'ny fenitra EN sy UIC.
• Fanaraha-maso ara-pahitana amin'ny andalana dia tanterahana tsy tapaka isan'andro, ary ny fisafoana ultrasonika ny lamasinina dia atao isam-bolana miaraka amin'ny masinina mora tohina.
• Ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ny tonelina dia tanterahana mifanaraka amin'ny fenitra mitovy.
• Ny serivisy ho an'ny fikojakojana dia tanterahina miaraka amin'ny Mpiandraikitra 1, Mpanara-maso sy fanaraha-maso ny 1, Mpanamboatra 4, Mpanadihady 3 ary mpiasan'ny 12 ao amin'ny Tale Jeneralin'ny Fikojakojana sy Fanamboarana.
FIVORIANA FARANY TOTALY 76,3 km
Ny halavam-bolan'ny Metro 63 km
- Isan'ny toerana misy eo amin'ny Surface 37 Pieces
Ny halavan'ny tohotra fiampitana tsipika fitehirizam-bokatra 13,6km
- Lava mandevona tonony 9,8 km
- Lavon'ny tonelina voatondraka 1,4km
- Misokatra - Manakatona ny halavan'ny tonelina 2,4 km
- Isan'ny fananganana ambanin'ny tany 3 sombin-javatra
Lava fiantsonana 225m (kely indrindra)
Isan'ny mpandeha amin'ny lalana iray Mpandeha 75.000 / ora / lalana
Hantsona faran'izay mety 18
Max Speed 100 km / h
Ny hafainganana varotra 45 km / h
Isan'ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina 2-10 minitra
Isan'ny fiara 440 (taona 2015)
Tunnel Submerged dia misy singa maro novokarina tao anaty kianja maina na tokotanin-tsambo. Ireo singa ireo dia tarihina ao amin'ilay tranokala, atsofoka ao anaty fantsona iray ary mampifandray mba hametrahana ny fanjakana farany amin'ny fantsona.
Ao amin'ny tarehimarika eto ambany, ny singa dia entin'ny boaty miady amin'ny catamaran mankany amin'ny toerana misy azy. (Tunnel Tunnel any Japana)
Ity sary etsy ambony ity dia mampiseho ireo fantsom-barotra vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny tontonana. Ireo tandroka ireo dia nokapaina toy ny sambo ary nifindra tany amin'ny toerana iray izay feno sy vita tanteraka (sary etsy ambony) [Port of Osaka any Japon (amin'ny alàlan'ny lalamby sy lalana) ao amin'ny Tunnel Kobe Port Minatojima any Japon.
ambony; Tontolon'ny seranan'i Kawasaki any Japon. marina; Fandefasana tora-pasika Osaka ao Japana. Ny roa amin'ireo endriky ny singa dia mikatona tsy tapaka amin'ny fanangonana; Noho izany, rehefa navoaka ny rano ary feno rano ny dobo ampiasaina amin'ny fananganana ireo singa dia avela hivezivezy ao anaty rano ireo singa ireo. (Sary nalaina avy amin'ny boky navoakan'ny Fikambanan'ny Japoney Mpandinika sy Mpanolo-tsaina Japoney).
Ny halavan'ny tonelina milentika ao am-dranomasina ao amin'ny Bosporus dia manodidina ny 1.4 kilometatra, ao anatin'izany ny fifandraisan'ny tonelina milentika sy ny tonelina mihetsika. Ny fantsona dia fifandraisana lehibe ao amin'ny lalamby roa làlana miampita manaraka ny Bosporus; io tonelina io dia eo anelanelan'ny distrikan'i Eminönü eo amin'ny lafiny eoropeanina Istanbul sy ny distrikan'i Üsküdar amin'ny lafiny Aziatika. Ireo andalana lalamby roa dia mivelatra ao anatin'ireo singa manelanelana mitovy vongana ary misaraka amin'ny rindrina fisarahana afovoany.
Nandritra ny taonjato faharoapolo, maherin'ny zato tapitrisa nohavaozina natsangana ho an'ny làlan-dàlana na fitaterana lamasinina manerana izao tontolo izao. Tendrombohitra nipoitra no natsangana ho rafitra mirenireny ary avy eo napetraka tao anaty fantsom-pandehanana teo aloha ary rakotra rakotra fanoratana. Ireo tavoahangy ireo dia tokony hanana lanjany mahomby mba hisorohana azy ireo tsy hilomano intsony aorian'ny fandefasana azy.
Tontonana nohatsaraina avy amin'ny andiam-panahin'ny tontolon'ny fambolena izay novolavolaina tamin'ny ankapobeny. Ireo singa tsirairay ireo dia amin'ny ankapobeny dia 100 m lava, ary rehefa tapitra ny tionelina ao amin'ny tavoahangy dia mifandray ireo singa ireo ary tafiditra ao anaty rano mba hiorina ny toetr'andro farany amin'ny tonelina. Ny singa tsirairay dia manaparitaka ny fametrahana ny fotoana voafetra amin'ny farany; Ireo singa ireo dia mamela ireo singa handehanana rehefa maina ny ao anatiny. Ny dingana famokarana dia vita amin'ny dock maina, na ireo zavatra ireo dia natomboka tao an-dranomasina toy ny sambo iray ary avy eo novokarina tany amin'ny faritra mikoriana ao akaikin'ny toerana fanangonana farany.
Ireo singa fantsona milentika voaangona sy vita ao anaty bazo maina na any an-tsambo dia alefa amin'ilay tranokala; atsofoka ao anaty fantsona iray ary mampifamatotra mba hampiorina ny fanjakana farany amin'ny tonelina. Eo ankavia: Ny singa dia voatosika ho any amin'ny toerana iray izay hanatanterahana ny fivoriambe farany mba handrosoana ao amin'ny seranana iray sahirana.
Ny singa tonelina dia afaka mahomby amina fahitana lavitra. Taorian'ny fanatanterahana ny fampitaovana tao Tuzla dia natsangana tany amin'ireo valan-javaboary teo amin'ireo sambo nohamboarina manokana ireo singa ireo mba ahafahan'ny mampidina ireo singa mankany amin'ny fantsom-pahavitana eo amoron-dranomasina. Ireo singa ireo dia atsofoka avy eo, manome ny lanja ilaina amin'ny fampidinana sy ny fandatsahana azy.
Ny fambolena singa dia hetsika mandany fotoana sy mitsikera. Ao amin'ny sary etsy ambony dia aseho ao ambany ao ilay singa. Io singa io dia fehezina amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana sy ny tariby ary ny vano eny amin'ireo lakandrano milentika dia mifehy ny toerana mitsangana mandra-pidina ilay singa ary hipetraka tanteraka eo amin'ny fototra. Eto amin'ny sary eto ambany, ny toeran'ny singa dia azo arahi-maso amin'ny GPS mandritra ny tsofina. (Sary nalaina tao amin'ny boky navoakan'ny Fikambanana Japoney momba ny Screening and Breeding Engineers.)
Ireo singa milentika dia atambatra miaraka amin'ireo singa teo aloha; aorian'izany dia nohidina ny rano tamin'ny elanelana misy eo amin'ireo singa mifandray. Vokatry ny fizotran'ny rano, ny tsindry amin'ny rano amin'ny faran'ny singa iray dia manery ny entona mikosoka izay manjavona ny rano. Natao teo amin'ny toerany ireo singa fanohanana ara-nofo raha vita ny fototry ny singa. Namboarina avy eo ny fantsona ary nampiana ilay takelaka fiarovana ilaina. Taorian'ny nampidirany ilay singa faran'ny fantsona, ny teboka vita amin'ny fantson-drindrina ary ny tonelina fantsona dia feno fitaovana famenoana manome rano. Tunneling Machines (TBMs) dia nampiasaina mba hitsofoka tao anaty tonelina mandra-pahatongan'ireo tonelina.
Ny tampon'ny tonelina dia rakotra miaraka aoriana, mba hahazoana antoka ny fiarovana sy ny fiarovana. Ireo fanoharana telo ireo dia mampiseho famerenam-bolo avy amin'ny feon-tsolika avo roa heny amin'ny fampiasana ny fomba tremi. (Sary nalaina tao amin'ny boky navoakan'ny Fikambanana Japoney momba ny Screening and Breeding Engineers)
Ao anaty tonelina milentika ao ambanin'ny tery, misy efitrano tokana misy efitrano roa, tsirairay avy ho an'ny lalana fanamoriana lalana. Voatsindrina tanteraka ao anaty ranomasina ny singa ka rehefa vita ny fananganana dia mitovy ny mombamomba ny vondron-dranomasina toy ny mombamomba ny valan-dranomasina alohan'ny nanombohan'ny fananganana.
Ny iray amin'ireo tombony amin'ny fomba fantsona milentika voaforona dia ny fiampitana ny lakandrano ao anaty tonelina dia mety mifanaraka tsara amin'ny filana manokana amin'ny tonelina tsirairay. Amin'izany fomba izany dia afaka mahita ireo fizarana samihafa samihafa ampiasaina eran'izao tontolo izao ianao amin'ny sary etsy ambony. Ny tonelina milentika dia namboarina tamin'ny endriny vita mivaingana nohamafisina, izay amin'ny fomba mahazatra, dia manana na valopy vy vita amin'ny vy ary miara-miasa miaraka amin'ireo singa mivaingana anatiny. Mifanohitra amin'izany, ny teknolojia maoderina nampiharina tao Japana hatramin'ny sivily, tamin'ny fampiasana concretes tsy nohamafisina nefa nasiana onja vita eo amin'ny valopy vita amin'ny vy sy ivelany; ireo concretes ireo dia mandrafitra tanteraka. Ity teknika ity dia azo ampiharina amin'ny famolavolana tsiranoka kalitao tena tsara sy betonetsy vita. Ity fomba ity dia afaka manafoana ny fepetra takiana mifandraika amin'ny fanodinana sy famokarana bara vy sy bobongolo, ary amin'ny fotoana maharitra, amin'ny fanomezana fiarovana ny katolika ampy ho an'ny valopy vy, dia azo esorina ny olana fifandonana.
TOLOHY ANDROANAO TUBE TANTSORO hafa
Ny tonelina eo ambanin'i Istanbul dia misy fifangaroan'ny fomba samy hafa.
Ny faritra mena amin'ilay làlan-dàlana dia misy fantsona milentika, fa ny ampahany fotsy dia amboarina amin'ny fantson-dranon-tsofina miaraka amin'ny masinina tonelina (TBM), ary ny faritra mavo dia ampiasaina miaraka amin'ny paikady Open-Close (C&C) ary ny New Austrian Tunneling Method (NATM) na fomba nentim-paharazana hafa. . Ny tarehimarika dia mampiseho Tunnel Boring Machines (TBM) miaraka amin'ny isa 1,2,3,4 sy 5.
Namboarina teo ambonin 'ny vatobe ireo tonelina fampiatoana nampiasa milina tonelina (TBMs) dia nifamatotra tamin'ilay tonelina nilentika. Misy ny tonelina isaky ny zoro sy ny làlamby manaraka ny tsirairay amin'ireo tonelina ireo. Ny tonelina dia natao tamin'ny elanelan'ny elanelana misy azy ireo mba tsy hisy fiantraikany ratsy. Mba hanomezana fahafaham-po ny fandosirana amin'ny tonelina mifanitsy amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny tendro fifandraisana fohy dia namboarina tamin'ny elanelana matetika.
Ny tonelina eo ambanin'ny tanàna dia mifandray amin'ny tsirairay isaky ny metatra 200; noho izany, omena fa ny mpiasan'ny serivisy dia afaka mivezivezy mora foana amin'ny zotra iray mankany amin'ny iray hafa. Ankoatr'izay, raha misy lozam-pifamoivoizana amin'ireo toradrano mihetsika, ireo fifandraisana ireo dia hanome làlam-panavotana azo antoka ary hanomezana fahafahana ho an'ny mpamonjy voina.
Ao amin'ny milina fanjonoana tonelina (TBM), ny fivoarana iombonana dia notsongaina tamin'ny taona 20-30 farany. Asehon'ireo sary ireo fa misy milina maoderina toy izany. Ny haben'ny ampingan'ny fiara dia afaka mihoatra ny metatra 15 miaraka amin'ny teknika amin'izao fotoana izao.
Ny fandidiana ny milina maoderina maoderina dia mety ho sarotra be. Mampiasa milina misy ramo telo, izay ampiasaina any Japon, ilay sary, mba hanokafana lalamby vita amin'ny oval. Ity teknika ity dia azo ampiasaina amin'ny toerana ilana ny arofenitra fitobiana, fa tsy ilaina.
Raha niova ny fizarana ny tonelina dia misy fomba fiasa maromaro manokana, ary koa ny fomba hafa, dia nampiharina (New Austrian Tunneling Methods (NATM), famoretana-tsofina ary milina fanokafana ny galera). Ireo fomba mitovy amin'izany dia nampiasaina nandritra ny fampangalarana ny tobin'ny Sirkeci, izay nalamina tao anaty tranokala lehibe sy lalina nosokafana ambanin'ny tany. Rindrambaona roa no namboarina tany ambanin'ny tany tamin'ny alàlan'ny teknika akaiky. Ireo toby ireo dia any Yenikapı sy Üsküdar. Raha ampiasaina ny tonelina misokatra malalaka dia namboarina ho toy ny tsipika cross iray ireo tonelina ireo mampiasa rindrina manasaraka rindrina eo anelanelan'ny andalana roa.
Amin'ireo tonelina sy serivisy rehetra dia apetraka ny fitokana-drano sy ny fitrandrahana mba tsy hisian'ny leaks. Ho an'ny lalamby lalamby any ambanivohitra dia hampiasaina ny foto-kevitra famolavolana mitovitovy amin'ireo ampiasaina amin'ny gara metro ambanin'ny tany. Ity sary manaraka ity dia mampiseho tsipika iray namboarin'ny fomba NATM.
Raha toa ka takiana am-pandriana mifampitohy amin'ny alàlan'ny torimaso mifampitampita dia ampiasa amin'ny fomba mirazotra ny fomba fanamboarana azy. Ao anatin'ity tonelina ity dia ampiasaina miaraka ny teknikan'ny TBM sy ny teknika NATM.
FIVORIANA SY FANINDRANANA
Ireo sambo fanalana miaraka amin'ny siny dia nampiasaina mba hanatanterahana ny fangalan-drano ao anaty rano sy ny fantson-drongony ho an'ny fantsona.
Napetraka tao anaty valan-dranon-dranon'ny Bosporus ny tantsambo namboarina. Noho izany, nisy fantsona iray nisokatra teo amin'ny gorodona amoron'ny ranomasina ampy hametrahana ireo singa manangana trano; Ankoatr'izay, ity fantsona ity dia namboarina tamin'ny fomba izay ahafahana manarona takelaka manarona sy miaro eo amin'ny Tunnel.
Ny asa fangalarana rano sy ny fanondrahana anaty rano ity dia natao midina avy eo, tamin'ny alàlan'ny fangalan-drano mahery sy fitaovana fanondrahana. Ny sandan'ny tany malefaka, fasika, grika ary akora nalaina dia mihoatra ny isan'ny 1,000,000 m3.
Ny halalin'ny halalin'ny làlana manontolo dia misy ao amin'ny Bosphorus ary manana halalin'ny 44 metatra. Tube famonoana: sosona fiarovana amin'ny 2 metatra farafahakeliny dia napetraka eo amin'ny tonelina ary eo ho eo amin'ny 9 metatra ny tsivalampeo. Araka izany, ny halalin'ny fijanonan'ny dredger dia manodidina ny 58 metatra.
Nisy karazana fitaovana voafetra maromaro ahafahana manatanteraka izany. Ny Dredger Dredger sy ny Tug Bucket Dredger dia nampiasaina tamin'ny tranokala screening.
Ny Grab Bucket Dredger dia fiara mavesatra mafy napetraka ao anaty sambofiara. Araka ny soso-kevitr'ity fiara ity, dia misy siny roa na mihoatra. Ireo siny ireo dia sokatra izay misokatra rehefa atsahatra ilay fitaovana avy amin'ny sambon-danitra ary miala amin'ny sambony ary mihantona. Satria mavesatra loatra ny siny, dia milentika any ambany ranomasina izy ireo. Rehefa niakatra avy any amin'ny fanambanin'ny ranomasina ny siny, dia mihidy izy io, ka ny fitaovana dia entina mankany amin'ny faritra ary mivoaka amin'ny sambony amin'ny alalan'ny siny.
Ny mpitaingina bakteria mahery indrindra dia afaka mamolavola manodidina ny 25 m3 ao anatin'ny tsingerin'ny fotoana iray. Ny fampiasana saka amin'ny labiera dia tena ilaina indrindra amin'ny fitaovana maoderina ary tsy azo ampiasaina amin'ny fitaovana mafy toy ny sandstone sy rock. Manana karazana bakteria ny iray amin'ireo karazana trondro tranainy indrindra; Na izany aza, dia mbola zatra maneran-tany izy ireo amin'izao fikarakarana sy fanodinana izany.
Raha ariana ny tany voaloto, dia azo ampidirina ao anaty siny ireo fitoeram-bokotra goavam-be. Ireo tombo-kase ireo dia misakana ny famoahana ny tahiry sisa sy ny sombin-tsoavaly ao anaty tsanganana amin'ny rano mandritra ny fisintonana ny siny dia miakatra avy any ambanin'ny ranomasina na hiantoka fa ny habetsaky ny singa mamoaka dia azo tazonina amin'ny ambaratonga voafetra.
Ny tombony azo avy amin'ny siny dia tena azo itokisana ary mahavita mandavaka sy mando amin'ny rano lalina. Ny tsy fatiantoka dia ny fihenan'ny sakamalaho amin'ny fihenan'ny lalim-paka, ary ny fiantraikan'ny ankehitriny ao amin'ny Bosporus dia misy fiantraikany amin'ny fahamarinana sy ny fanatontosana ankapobeny. Ankoatr'izany, ny fangalarana sy ny screening dia tsy azo atao amin'ny fitaovana sarotra misy vehivavy.
Ny Dredger Bucket Dredger dia sambo manokana iray napetraka miaraka amin'ny karazan-java-drongon-drongony ary fitaovana manapaka miaraka amin'ny fantsom-bidy. Raha mandeha amin'ny lalana ilay sambo, ny tany mifangaro amin'ny rano dia voatobaka avy any ambanin'ny ranomasina mankany anaty sambo. Ilaina ny milentika nilahatra ao an-tsambo. Mba hamenoana ny habetsaky ny fahabetsahana dia tsy maintsy ilaina antoka fa rano be sisa no afaka mivoaka avy ao anaty sambo raha toa ka mihetsika ny sambo. Rehefa feno ny sambo dia mipaka any amin'ny toerana fanariana fako ary feno ny fako; dia vonona ny sambo ho amin'ny fiodinan'ny adidy manaraka.
Ny mpitaingina bateria mahery vaika mahery indrindra dia afaka mihazona manodidina ny 40,000 tonnes (manodidina ny 17,000 m3) fitaovana ao anaty dingana iray miasa ary afaka mikaroka sy manadihady amin'ny halavirana 70 metatra. Ny mpitrandraka mpitrandraka alikaola dia afaka mamoaka sy manadino amin'ny fitaovana malefaka.
Ny tombony amin'ny mpitrandraka mpamandrihana Dredger; Ny fahaiza-manaony ambony sy ny rafitra finday dia tsy miankina amin'ny rafitra fiarovana. Ny fatiantoka; ary ny tsy fahampian'ny fahatakarana sy ny fikarohana ary ny fanodinana miaraka amin'ireo sambo ireo any amin'ny faritra akaikin'ny moron-dranomasina.
Ao amin'ny serivisy fampifangaroana amin'ilay tonelina milentika, dia nisy ny vatolampy novoaka sy nidina teo akaikin'ny morontsiraka. Dingana roa samy hafa no narahina amin'ity dingana ity. Ny iray amin'ireto fomba ireto dia ny fampiharana ny fomba fenitra amin'ny fanodinana rano sy fipoahana; ny fomba hafa dia ny fampiasana fitaovana fanadinana manokana, izay ahafahan'ny vatany mihamontsina tsy manapoaka. Samy miadana sy lafo ny fomba roa ireo.
Ankara Metro, spésifikasi teknika ary sarintany
Marmaray Suburban System Rafitra Marmaray ary…
Fanamarihana Tender: F8L413F karazana milina lohalika…
Sets sy fiaran-dalamby haingam-pandeha avo lenta - CAF HT65000
Fiatrehana ara-teknika eo amin'ny Marmaray! Niverina tamin'ny ara-dalàna ny fitaterana
Mitohy any Samulaş ny fampiofanana ara-teknika
SAMULAS dia manohy ny fampiofanana ara-teknika tsy misy fiatoana
General Electric, 2020 vehivavy hatramin'ny 20.000…
Sekolin'ny fanabeazana ara-teknika sy ara-teknika ao Atatürk
Fampiasam-bolan'ny orinasa lozisialy mifangaro ao Mardin…
Fitsidihana ara-teknika avy amin'ny TCDD mankany amin'ny lalamby Marokanina
Fihaonana ara-teknika ho an'ny tetikasa Light Rail System Trabzon
Fanamarihana Tender: Fanitsiana sy asa fanamboarana ary…